Madheshvani : The voice of Madhesh - मधेशका महिलाले अवसर पाए नेतृत्व गर्न सक्छन् : हंसा साह
० महिलाका के कस्ता समस्याहरू देख्नुभएको छ ?
— महिलाको समस्या मधेशमा अझै पनि प्रशस्त रूपमा रहेका छन् । हामी अनवरतबाट मधेशी महिलाहरूलाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक हिसाबले अगाडि लिन प्रयत्न गरिरहेका छौ । मधेशमा अझै पनि महिलाहरूलाई घरायसी कामबाट बाहिरको काममा जान अनुमति नदिने, तथा बाहिर गएपनि राम्रो नमान्ने समस्याहरू रहेका छन् । राजनीतिक दल, विभिन्न संस्थाहरू विभिन्न संगठनहरू पनि महिलाको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक स्थीति सुधार गर्न प्रयत्न गरिरहेको पाइन्छ । तर पनि जुन हिसाबले महिलाहरू आत्मनिर्भर भएर प्रस्तुत हुनु पर्ने हो । त्यो वातावरण बन्न सकेको छैन ।
० तराई मधेशका महिलाहरू अझै पनि घुम्टो प्रथाबाट बाहिर निस्कन नसक्नुको कारण के हुन सक्छ ?
— पहिलेको तुलनामा अहिले मधेशमा धेरै परिर्वतन भईरहेको छ । मधेशका महिलाको शैक्षिक अवस्थामा पनि सुधार आइसकेको छ । तत्कालीन अवस्थामा घुम्टो प्रथा भनेर जति मात्रामा भ्रम भैलिएको छ, त्यति दयनीय वा भयावहक स्थिति छैन । महिलाहरू शिक्षित र परिवर्तित भइसकेका छन्, जसले गर्दा अवसर दियो भने पछाडि नहटि हिम्मतका साथ काम गर्न सक्छन् । महिलाको विकासको बाधक भनेर कुनै ठूलो विषयका रूपमा घुम्टो प्रथालाई लिनु उपयुक्त हुँदैन ।
० मधेशका महिलाहरू अझै पनि प्रभावकारी रूपले नेतृत्व पंक्ति तथा नेतृत्वकर्ताको रूपमा आउन नसक्नुको कारण के देख्नु हुन्छ ?
— घरायसी कामकाजमा बाँधिनु, संविधानमा नै लेखिए पनि जसरी महिलाहरूले अवसरहरू पाउनुपर्ने त्यो हिसाबले अवसर नपाउनु, घरबाहिर सुरक्षाको अवस्था खुकुलो हुनु, जसले गर्दा महिलालाई बाहिर जान परिवारबाट अनुमति नदिनु, घर परिवारभन्दा पनि देशका लागि केही गर्छु भन्ने सोचको विकाशका लागि महिलाहरूमा त्यो किसिमको चेतनाको कमी हुनु लगायतका समस्याहरू छन् । यस्ता कारणहरूले गर्दा महिला नेतृत्वपंक्तिमा कम सहभागिता देखिन्छन् । तर, मधेशका महिलाहरूले अवसर पाउने हो भने सशक्त रूपमा अगाडि आउन सक्छन् ।
० मधेशमा महिलाप्रति दाइजो तथा बोक्सी जस्ता कुरालाई लिएर विभिन्न घटनाहरू दिनप्रति दिन घटिरहेका छन्, यसरी तीन तहको सरकारबाट पनि नियन्त्रण हुन नसक्नुलाई तपाई कसरी लिनुहुन्छ ?
— देशमा तीन तहको सरकार छ, अझ भनौं प्रदेश २ मा बेटी बचाउँ बेटी पढाऊ कार्यक्रम व्यापक रूपमा सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ । तर पनि महिला हिंसा बढ्दो छ । यसको न्यूनीकरण वास्तविक रूपमा जुन तरीकाले हुनु पर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन । चेतनाको कमी भनौँ या कानूनी अवस्था फितलो हुनु जे भएपनि महिला प्रतिको हिंसा न्यूनीकरण भएको छैन । त्यसैले जनमानसमा यो कुरा उठाउनु पर्छ र एकरूपताका साथ यो कुराप्रति सबैमा ध्यानार्कषण गराउनुपर्दछ ।
० प्रदेश २ मा सञ्चालित बेटी बचाऊ, बेटी बढाऊ कार्यक्रम कतिको प्रभावकारी बनेको छ ?
— कार्यक्रम ल्याउनु राम्रो हो, राम्रो छ तर वास्तविकतामा त्यत्ति प्रभावकारी हुन सकेको छैन । तत्कालै पनि एक किशोरी माथि एसिड आर्कमण भयो । यो के कारणले भयो त ? त्यहाँको मानिसमा चेतनाको कमी भयो या कानूनी अवस्था फितलो भयो । यसरी दिनप्रति दिन असुरक्षा बढ्दै जानु आक्रमण हुनु यो राम्रो पक्ष होइन । यसलाई भने प्रदेश सरकारको कमीकमजोरी भन्न सकिन्छ ।
० ‘बेटी बचाउ, बेटी पढाऊ’ कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन के गर्नुपर्ला ?
— उहाँहरूले जति पहल गर्नु भएको छ त्यो सराहनीय छ । साइकल वितरणदेखि लिएर हरेक कार्यक्रमहरू तर यतिले मात्र हाम्रा छोरी चेलीहरू सुरक्षित रहन सक्दैनन् । जबसम्म आर्थिक र शैक्षिक रूपले महिलाहरू सवल बन्दैनन् तबसम्म महिलाहरू सुरक्षित रहन सक्दैनन् । योग्यता र सक्षमताको आधारमा सबैलाई काम दिन सक्नुपर्छ, त्यहाँको व्यवसायको प्रवर्धन गर्न सक्नुपर्छ । साथै रोजिरोटिका सम्भाव्य क्षेत्रहरूमा उनीहरूलाई अवसर दिनुपर्दछ । एनजियो आइएनजिओहरूले विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याउँछ तर यसलाई प्रभावकारी रूपले सञ्चालन नगरी बजेट मात्र सिध्याएको देखिन्छ । यसलाई पनि प्रभावकारी तरीकाले सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसरी नै महिलाहरूको चौतर्फी विकासमा ध्यान दिने हो भने कार्यक्रम प्रभावकारी हुनुका साथै महिलाको स्थितिमा पनि सुधार आउँछ ।
० महिलाको नाममा भएका कार्यक्रमहरू प्रायः महिला हितमा समर्पित नभई बजेट सक्ने माध्यम भएको मान्न सकिन्छ ?
— म आफै पनि कतिपय कार्यक्रममा गएर प्रत्यक्ष अवलोकन गरेकी छु । प्रायः जसो ठाउँ तथा कार्यक्रममा बेसिक कोर्ष मात्र सिकाउने र बजेट सिध्याउने तर ब्मखबलअभम अयगचकभ भने नसिकाउने जस्ता कार्यहरू भइरहेको देखिएको छ । यसरी सिकाएको सिकाई वास्तविक रूपमा प्रभावकारी हुन नसक्नुका साथै उनीहरूले पुनः त्यो व्यवसाय गर्न सक्दैनन् । यसमा कार्यक्रम योजनाकर्ताको निगरानी राम्रो हुनु पर्दछ । यस्ता कार्यक्रमहरू लिइसकेपछि प्र्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नु पर्दछ अनि मात्र बजेट सक्ने कार्यक्रमको प्रभाव सिकारूमा नपर्ने हुनु हुँदैन ।